L'ART FASHION STYLISTE: Tovolahy mpamorona lamaody vao 17 taona monja - Journal Madagascar
“Manana haingam-panahy hamorona zavatra miavaka”. Tovolahy 17 taona efa milomano sahady ao anatin’ny asa famoronana lamaody i Nomenjanahary Heriniaina Aimé Larry. Avy any amin’ny faritra Alalotra Mangoro izy. “Tiako ny asa famoronana , indrindra eo amin’ny sehatry ny fiakanjona. Izaho rahateo misy haingam-panahy hamorona zavatra miavaka”, hoy i L’Art Fashion Styliste. Nambaran’i Larry fa hampiseho ireo vita Malagasy ary hanasongadina fa tsara sy kanto ny vita Malagasy no tanjony. “Tsy hifanandrina velively amin’ireo Styliste malagasy mitovy amiko aho fa kosa vonona hiara-hiasa amindry zareo mba hahatonga an’i Madagasikara ho lasa lavitra eo amin’ny tontolon’ny Haizaitra”, hoy izy.
Manana ny mampiavaka azy ny asa tanan’i Nomenjanahary Heriniaina Aimé Larry. “Amin’ny ankapobeny dia tsotra ny zavatra vokariko nefa tena miavaka. Ny loko sy ny didin-damba ary ny pitsopitsony (vozony, bokotra,…) no mampiavaka ny asan’ny tanako”, hoy izy. Vao iray taona izy no niditra tao amin’ny tontolon’ny famokarana lamaody. Nilaza izy fa hikolokolo io talenta nomen’Andriamanitra azy io ary hampitombo ny traikefa hananany. Araka ny fanazavany dia mianan-tena izy amin’ity sehatry ny haizaitra ity. Marihina fa miara-miasa akaiky aminy ny The red Carpert eto Antananarivo.